အစပြုသူများအတွက် Ultimate Europe Train Trip | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အစပြုသူများအတွက် Ultimate Europe Train Trip
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ဥရောပပြင်ပကဒီမှာ? သငျသညျသကဲ့သို့ငါနံနက်အဖြစ်အများသုံးအားဖြင့်တျရှုပျထှေးနေလျှင်သင်၏လက်ကိုမြှင့်. သေချာတာပေါ့, နယူးယောက်မှာမြေအောက်ရထားရှိတယ်, နှင့်တိုရွန်တိုမက်ထရိုပြေး, ဒါပေမယ့်အားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားတဲ့, ကမ္ဘာကြီးသည်ကားများပေါ်တွင်ရှင်သန်ကြီးထွားလာသည်. ဒါကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်တစ်ဖန်စီပြင်သစ် baguette များအတွက်ရေကန်ဖြတ်ပြီး-hop အောင်ရှာတွေ့သည့်အခါတိုင်း, အမှုအရာအနည်းငယ်မြားမြားရနိုငျပါသညျ. ဤပထမ-တိုင်မားများအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်, အဘယ်သူသည်ကိုမကြာခဏရထားသူတို့ရဲ့ဥရောပခရီးစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတိအကျဘယ်လိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်, သူတို့သွားလာသင့်ပါတယ်ရှိရာတစ်ဦးတည်းပါစေ.
က Eurostar နှင့်ကွာခြားချက်င်ရှိမရှိ TGV ရထားကွန်ယက် (T ကမိုး , Gအစွန်း V ကိုချစ်တယ်) သို့မဟုတ်သွားလာရန်ကြိုးစားနေသည် ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားထား နှင့်အဆင့်မြင့်လက်မှတ်များ, ကအားလုံးကိုနည်းနည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါသည်. ကျွန်မနံနက်အဖြစ်ကိုဆုံးရှုံးအဖြစ်သူတို့အဘို့, ကျနော်တို့ Beginners များအတွက်အတူတကွသင်ရထားအားဖြင့် Ultimate ဥရောပခရီးစဉ်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်ကိုစုဝေးစေတော့.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. thဆောင်းပါးရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save, ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိဝဘ်ဆိုက်.
စတင်သူများအတွက်ဥရောပရထားခရီးစဉ် 1: လန်ဒန်
ကြှနျုပျတို့သညျဤလမ်းခရီးတွင်ပထမဦးဆုံးမှတ်တိုင်အဖြစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကိုရှေးခယျြင့်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခြုံငုံကပဲအများဆုံးသဘာဝကျပါတယ်. မြောက်အမေရိကကနေလန်ဒန်ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်မကြာခဏနှင့်စျေးပေါများမှာ, ဆိုလိုတာကသင်ဟာ Frankfurt (သို့) အခြားဥရောပအချက်အချာကျသို့ပျံသန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးအနက်ထားတဲ့ငွေအချို့စုဆောင်းလိမ့်မယ်.
လန်ဒန်ကြီးမားတဲ့အချက်အချာဖြစ်ပြီးသင်တို့သည်နောက်ဒုက္ခလုပ်ဖို့အမှုအရာကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. သင်တစ် ဦး ဟယ်ရီပေါ်တာပန်ကာနေလျှင်, တမြို့စာအုပ်နှင့်ရုပ်ရှင်ကိုးကားနှင့်အတူထူပြောနေတယ်ဖြစ်ပါသည်. သင်ပြဇာတ်ရုံသို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, Soho သည် Broadway ဖျော်ဖြေရေးတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်, နှင့်သင်မကြာခဏတစ်ဦးလျှော့စျေးမှာလက်မှတ်တွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
သင်အလွယ်တကူလှုပ်ရှားမှုများကုန်ခမ်းတော့မှာမပါဘဲကဒီမှာရက်သတ္တပတ်သုံးဖြုန်းနိုင်, ဒါပေမယ့်နိမ့်ဆုံးမှာ, ကျနော်တို့လေးရက်အကြံပြုပါသည်. သင်တို့အပေါ်မှာရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲပြီးတာနဲ့, သင်၏နောက် destination သို့ဦးကဖွင့်အချိန်.
ရထားမှတ်တိုင် 2: ပဲရစ်
သငျသညျ၌အချိန်ဖြုန်းစရာမလိုဘဲဥရောပ hit နိုင်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အများဆုံးရင်ခုန်စရာ မြို့. အလင်း၏စီးတီးတစ်ဦးမဖြစ်မနေ-stop ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသို့မဟုတ်သင့်ဒသမအလည်အပတ်ခရီးင်ရှိမရှိ, နှင့်ကံကောင်းတာခရီးသွားများအတွက်, အဆိုပါ Eurostar ရထား ပြေးပဲရစ်မှလန်ဒန်ကနေနီးပါးတိုင်းနာရီ. အဆိုပါခရီးအနည်းငယ်ကျော်ကြာ2နာရီနှင့် ရထားလက်မှတ်တွေကိုကြိုတင်ကြိုတင်မှာယူလို့ရပါတယ်.
ကျနော်တို့အပြင်ကဒီမှာလေးရက်အနည်းဆုံးဖြုန်းအကြံပြု, သို့သော် သင်၏အားလပ်ရက်အချိန် သငျသညျနှစျခုကချညှစ်နိုင်ကန့်သတ်သည်.
စတင်သူများအတွက်ဥရောပရထားခရီးစဉ် 3: ဘာစီလိုနာ
ဒီလာမယ့်မှတ်တိုင်ရထားအတော်လေးခရီးဖြစ်သော်လည်း, သင်တစ်ဦး၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည် အိပ်ပျော်ကားတစ်စီး ဒီကမ်းရိုးတန်းမြို့သို့မရောက်မီသင့်အိပ်မောကျစေရန်. Gothic ရပ်ကွက်ကိုလှည့်ပြီး Parc Guell ကိုမသွားမီချောကလက်နှစ်ခြိုက်ထားသော churros အချို့ကိုနှစ်သက်ပါ.
ဘာစီလိုနာ၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာစပိန်သည်၎င်း၏မြောက်ပိုင်းအိမ်နီးချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်စျေးပေါသည်, ဒါကြောင့်မင်းအတွက်အများကြီးရလိမ့်မယ် ဒီမှာပိုက်ဆံ. ကျနော်တို့မြို့စူးစမ်းဖို့ကဒီမှာအနည်းဆုံးနှစ်ရက်တည်းခိုအကြံပြု.
ရပ် 4: Nice Ville
ယင်း၏ boardwalk နှင့်အလွန်နီးကိန်းများအတွက်ကျော်ကြားသော, Nice Ville သည်သင်၏ဥရောပရထားခရီးစဉ်တွင်ရပ်တန့်ရန်ကောင်းသည်. မြို့သူမြို့သားကိုယ်တိုင်ကပြင်သစ်ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်အကြီးစားမဟုတ်ပေမယ့်, ယင်း၏တည်နေရာအတော်ကြာခံထိုက်နေ့ကခရီးစဉ်ကနီးသည်. ပဌမ, အဆိုပါလောင်းကစားရုံမှာမိုနာကိုနှင့်ဆုံးရှုံးငါးဒေါ်လာမှဦးခေါင်း. အဆိုပါဖန်စီကားများခံစားကြည့်ပါနှင့်နောက်တော်သို့လိုက် နည်း 1 အဆိုပါကမ္ဘာကျော်အပြေးပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းအပေါ်လမ်းကြောင်း. နောက်တစ်ခု, ကိန်းသို့ရထားစီးပါ – သင်ပွဲတော်ကာလအတွင်းရှိနေလျှင်ကြီးမားသောနာမည်ကြီးတွေထဲကတစ်ခုမျက်စိစောင့်ရှောက်!
စတင်သူများအတွက်ဥရောပရထားခရီးစဉ် 5: ရောမမြို့
အဆိုပါအီတလီမြို့တော်မျက်စိကိုအဘို့ပွဲဖြစ်ပါတယ်. စပိန်ခြေလှမ်းများကနေမှ Trevi ရေပန်း, သင်အားဖြင့်လွမည်မဟုတ်ပါနီးပါးဘယ်နေရာမှာရှိပါတယ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဗိသုကာ. ကြောင်းလုံလောက်စွာမကြီးဘူးဆိုရင်, အစားအစာတန်ဖိုးရှိကျော် slavering ဖြစ်ပါတယ်. လတ်ဆတ်တဲ့ gelato နှင့်ကျွဲ mozzarella နှင့်အတူလူ့လက်ခေါက်ဆွဲ vies လယ်မြေကနေဖြောင့်ရောက်လာပြီ.
သိပ်အများကြီးဘယ်တော့မှရိုးသားစွာရှိပါတယ် ရောမမြို့မှာနေဖို့အချိန်, သင်မူကားငါးရက်တစ်နိမ့်ဆုံးအပြီးလုပ်ချန်ထားရမည်ဆိုပါက.
ရပ် 6: ဗင်းနစ်
ငါသည်သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်အတွင်းဗင်းနစ်ကိုမဖော်ပြခဲ့ပါလျှင်ငါလွှတ်ပါလိမ့်မယ်. ငါအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသည်မပြုခဲ့ပေမယ့် (များလွန်းလှည့်ခရီးသည်များ), ဤမြို့ကိုတစ်ဦးမဖြစ်မနေ-do ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ gondolas နှင့်အများပြည်သူလှေအကြား, သငျသညျတူးမြောင်းကိုဖြတ်ပြီးဥရောပ၌အများဆုံးရင်ခုန်စရာဆိုဒ်များမှသင်၏လမ်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ကျနော်တို့အကြံပြု ဗင်းနစ်တွင်အနည်းဆုံးနှစ်ရက်နေ ရထားကိုနောက်တစ်လမ်းသို့မသွားမီ.
စတင်သူများအတွက်ဥရောပရထားခရီးစဉ် 7: ဗီယင်နာ
ဤတွင်ကျနော်တို့အများဆုံးခရီးထွက်လမ်းကြောင်းမှထွက်ခွာနှင့်လမ်းထဲကတစ်နည်းနည်းတည်နေ. ဒါဟာကောင်းသောအကြောင်းပြချက်င်, သော်လည်း, ပိုပြီးဗဟို-တည်ရှိပြီးဥရောပနိုင်ငံများတွင်သတိမမူခြင်းကိုဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်အဖြစ်. ဤရွေ့ကားအချို့ဒီကဗျာကွဲပြားမှုနှင့်အတူအနောက်၏အရသာနှင့်အသွင်ရှိ. ဗီယင်နာအတွက်, ဒီတစ်ခုဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ဆိုလိုသည် ကော်ဖီယဉ်ကျေးမှု နှင့်ကျောက်အောက်ခြေစျေးနှုန်းများ. သင်ပိုမိုဘာကိုလိုချင်တာနိုင်?
ရပ် 8: ပရာ့ဂ်
ဒီနှစ်ထောင်ချီသောမြို့သည်၎င်း၏ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်. သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ,, ကလေးငယ်ကိုသညျယရှေုကိုမွငျဖို့ဦးတည်ရှေ့တော်၌ထိုအာကာသနာရီအချိန်တွင်ရပ်တန့်ဖို့မေ့လျော့ကြဘူး. သငျသညျသမိုငျးတှငျစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်, အဟောင်းကဂျူးနေဆဲအတင်းအကျပ်မြို့သားတို့၏အမှတ်အသားများဖြင့်သမုတ်သော. ယနေ့ခေတ်ဧရိယာကျယ်ပြန့်ပြန်ပြုပြင်ထားပြီးနေစဉ်, သင်ဆဲက၎င်း၏ခြောက်ဦးတရားစရပ်တို့၌သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
Nuremberg to Prague လက်မှတ်တွေ
စတင်သူများအတွက်ဥရောပရထားခရီးစဉ် 9: ဘာလင်
တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းမှတစ်ဦးကသေတမ်းစာ, ဘာလင်ယနေ့တင်ပါးဆုံရိုးဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှု၏အချက်အချာဖြစ်ပါသည်. သင်တစ် ဦး hipster ဘားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားနေရှိမရှိ အနုပညာပြတိုက် ဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်းစားသောက်ဆိုင်အဖြစ််၏, သငျသညျဖွစျခငျြဘယ်မှာဘာလင်ဖြစ်ပါသည်. ဤနေရာတွင်လုပ်ဖို့အရာဝန်ရှိပါတယ်, ဘာလင်တံတိုင်း၏အကြွင်းအကျန်တစ်ဦးအလည်အပတ်အပါအဝင်. ဒါပေါ့, အပြင်လူအပေါင်းတို့သည်အစဉ်အလာပြတိုက်များနှင့်ပြခန်းရှိပါတယ်.
ရပ် 10: အမ်စတာဒမ်
သငျသညျဗင်းနစ်အတွက်တူးမြောင်းကိုမြင်ရပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဘာမျှမပုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဘို့သင့်ကိုပွငျဆငျနိုငျ, အမ်စတာဒမ်၏စနစ်တကျမြို့. ဒတျချြမြို့တော်စက်လှေများနှင့်စက်ဘီးထက်ကားများမှမူလနေရာဖြစ်သည်, သငျတို့သအလွယ်တကူဗိသုကာမှာ gawping ကဒီမှာအားလုံးသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါတယ်.
သင့်ကိုအကြံပေးလိုပါတယ် အမ်စတာဒမ်ကိုသွားမယ် ဒီမှာအနည်းဆုံးသုံးရက်နေတယ်, သငျသညျလေးငါးနှင့်အတူပိုကောင်းလုပ်ပေးချင်ပါတယ်သော်လည်း.
အဲဒီမှာသင်ရှိသည်. ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေအမ်စတာဒမ်နှင့်နေရာတိုင်းကြား၌, ဒီဥရောပရထားခရီးစဉ်စတင်များအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းပြဖြစ်ပါသည်. အမ်စတာဒမ်အတွက်, သငျသညျကိုအသုံးပြု။ လန်ဒန်ကိုပြန်သွားဖို့အခမဲ့ပါပဲ တစ်ဦးကရထား Save, ဒါမှမဟုတ်ညာဖက်နယ်သာလန်ကနေအိမ်ပြန်ခေါင်း.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “အစပြုသူများအတွက် Ultimate Europe Train Trip” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-trip-beginners%2F%3Flang%3Dmy ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ပြီးတော့သင်ရွေးချယ်သောသင်၏ဘာသာစကား fr နှင့် tr သို့အခြားဘာသာစကားများကိုအစားထိုးနိုင်သည်.
တချို့ကယူရို Save ပြီးတော့တစ်ဦးကရထားပြီးတော့ခရီးသွားဥရောပယူပါ